China PLC Mashiinka Kuleyliyaha Cadaadiska Cadaadiska oo leh Saddex Saldhig oo warshadeed HEY01 iyo soo saarayaasha | GTMSMART
Mashiinka Kuleyliyaha Cadaadiska ee PLC oo leh Saddex Saldhig HEY01
Tani Mashiinka Kuleyliyaha Cadaadiska Inta badan soo saarista weelal caag ah oo kala duwan ( saxaarad ukun, weel miro, weel cunto, weelasha baakadaha, iwm) oo leh xaashi heerkulbeeg ah, sida PP,APET, PS, PVC, EPS, OPS, DAAWO, PLA, CPET,iwm.
Isku darka makaanikada, pneumatic iyo korantada, dhammaan ficilada shaqada waxaa gacanta ku haya PLC. Shaashada taabashada ayaa ka dhigaysa hawlgalka mid ku habboon oo fudud.
Cadaadis iyo/ama vacuum samaynta.
Mashiinka kuleyliyaha: kor iyo hoosba caaryada samaysmaya.
Quudinta matoorka Servo, dhererka quudinta waxaa lagu hagaajin karaa tallaabo-yar. Xawaaraha sarreeya oo sax ah.
Kuleyliyaha sare & hoose, kululaynta afar qaybood.
Kuleyliyaha leh nidaamka xakamaynta heerkulka maskaxda, kaas oo leh saxnaanta sare, heerkulka isku midka ah, laguma dhaqmi doono danab dibadda ah. Isticmaalka tamarta hooseeya (tamarta 15%), hubi nolosha adeegga kululaynta ee foornada.
Sameynta iyo jarista caaryada cutubka furan oo dhow oo ay maamusho servo motor, alaabta si toos ah ayaa loo tiriyaa.
Alaabooyinka hoos ayaa loo raray
Mashiinka kulaylka caagga ah: shaqada xafidista xogta.
Balaadhka quudinta waxaa lagu hagaajin karaa si isku mid ah ama si madaxbanaan ayaa loo hagaajin karaa habka korantada.
Kuleyliyaha ayaa si toos ah u soo riixi doona marka xaashidu dhammaato.
Si otomaatig ah u rarista xaashida duubista, yaree culayska shaqada.
Meesha Samaynta ugu badan (mm2)
Samaynta, Goynta, Isdul-saarista
Ballaca xaashida (mm) 350-720
Dhumucda xaashida (mm) 0.2-1.5
Max. Dia. Wareegga Xaashida (mm) 800
Samaynta Stroke caaryada (mm) Caaryada sare 150, Down Mold 150
Isticmaalka Korontada 60-70KW/H
Balaadhka Caaryada (mm) 350-680
Max. Qoto dheer oo la sameeyay (mm) 100
Goynta Istaroogga caaryada (mm) Caaryada sare 150,Down Mold 150
Max. Aagga Goynta (mm2) 680×500
Xawaaraha qalalan (wareegga/daqadda) ugu badnaan 30
Habka qaboojinta alaabta By Biyo Qaboojin
Bixinta Korontada 3 waji 4 xariiq 380V50Hz
Max. Awood kuleyliyaha 121.6
Max. Awoodda Mashiinka Dhan (kw) 150
Max. Cabirka Mashiinka (L*W*H) (mm) 11150×2300×2700
Miisaanka Mashiinka Dhan (T) ≈11
Summada Qaybaha Muhiimka ah
Kormeeraha Shaashada taabashada (10 inch) Taiwan Delta
Quudinta Servo Motor (3kw) Taiwan Delta
Samaynta Down Mold Servo Motor (3kw) Taiwan Delta
Samaynta Mold Servo Motor (3kw) Taiwan Delta
Goynta Mold Servo Motor (3Kw) Taiwan Delta
Goynta Mold Mold Servo Motor (5.5Kw) Taiwan Delta
Is dulfuulan Servo Motor (1.5Kw) Taiwan Delta
Kuleyliyaha (192 pcs) JOOJIN
Xiriiriyaha AC Faransiiska Schneider
Gudbinta Dhexdhexaadka ah Japan Omron
Bedelka Hawada Kuuriyada Koonfureed LS
Qayb pneumatic ah MAC. AirTAC/ZHICHENG
Silinder Shiinaha ZHICHENG
Hal qayb oo ka mid ah GTMSMART Machinery Co., Ltd.waa shirkad tignoolajiyadeed cusub oo isku xidha tignoolajiyada, warshadaha iyo ganacsiga. Waxay inta badan horumarisaa oo soo saartaa noocyo kala duwan oo qalab wax soo saar toos ah oo toos ah.
Hore: Xawaaraha Sare Si Buuxda Atoomatiga Ah
Xiga: Full Servo Plastic Cup Mashiinka Samaynta HEY12
Mashiinka Heerarka Heerarka Cadaadiska Hawada
Mashiinka Samaynta Cadaadiska Tooska ah
Mashiinnada Samaynta Caagagga
Mashiinka Samaynta Cadaadiska Caaga
Mashiinka kuleyliyaha PP
Mashiinka Kuleyliyaha Cadaadiska
Shirkadda Thermoforming Machine
Qiimaha Makiinada Heerarka
Afar Saldhig Mashiinka Kulaylka Caaga Weyn ee HEY02
Horudhaca Alaabta Afar Saldhig oo waaweyn oo PP ah oo heerkulbeegga heerkulbeegga ah ayaa samaynaysa, goynaysa oo isku xidhaysa hal xariiq. Waxaa si buuxda u kaxeeya servo motor, hawlgal deggan, buuq yar, eff sare ...
Hal Saldhig oo toos ah Mashiinka Heerarka Heerarka HEY03
Horudhaca Alaabta Hal Saldhig oo Keliya Mashiinka Kuleyliyaha Tooska ah Inta badan soo saarida weelasha balaastikada ah ee kala duwan ( saxaarad ukun, weel miro, weel cunto, weelasha baakadaha, iwm) iyo...
Saddexda Saldhig Mishiin Samaynta Cadaadis Xun HEY06
Mashiinka heerkulbeegga ee Haydarooliga Servo Plastic Cup HEY11
Codsiga Mashiinka Heer-kulka Koobabka Dhammaan Makiinada heerkulbeegga caagga ah Inta badan ee soo saarista weelal caag ah oo kala duwan ( koobabka jelly, koobabka cabitaanka, koob la tuuri karo, baakad sii socota ...
Mashiinka heerkulka Daboolka Tooska ah ee HEY10
Mashiinka Kuleyliyaha Dheriga Ubax ee tooska ah ee Haydarooliga HEY15B-2